ကမ္ဘာ့လူဦးရေပြ မြေပုံ (၂၀၁၄)
နိုင်ငံအလိုက် ကမ္ဘာ့လူဦးရေ ရာခိုင်နှုန်း
ဤစာရင်းတွင် ပါဝင်သော အချက်အလက်များကို နောက်ဆုံးရရှိသည့် နိုင်ငံတော်အဆင့် သန်းခေါင်စာရင်းများ၊ ခန့်မှန်းစာရင်းများမှ အခြေခံထားသည်။ တရားဝင်စာရင်းမရနိုင်ပါက ကုလသမဂ္ဂ စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးဌာန၊ လူဦးရေဌာနခွဲ၏ ၂၀၁၇ ခန့်မှန်းစာရင်းများအပေါ် အခြေပြုထားသည်။
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံချင်းစီတွင် ဤအချက်အလက်များကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း ပြင်ဆင်ထိန်းချုပ်ခြင်း မရှိသည့်အတွက် နှိုင်းယှဉ်မှုရလဒ်များသည် ကောက်ချက်လွဲမှားနေနိုင်ပါသည်။ အလားတူ နိုင်ငံများအားလုံး၏ အချက်အလက် စုစုပေါင်းသည် ကမ္ဘာ့ စုစုပေါင်းအချက်အလက်များနှင့်လည်း ကိုက်ညီမနေနိုင်ပါ။
ဤစာရင်းတွင် ဥရောပသမဂ္ဂ ကဲ့သို့သော အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံမဟုတ်သည်များ၊ အန္တာတိကတိုက်ကဲ့သို့ အမြဲတမ်းလူနေထိုင်မှု မရှိသော လွတ်လပ်သည့် နယ်မြေဒေသများ မပါဝင်ပါ။
လူဦးရေ အလိုက် နိုင်ငံနှင့် နယ်မြေဒေသများ
မှတ်ချက်။ အချုပ်အခြာ အာဏာပိုင်နိုင်ငံများ၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သော အမှီအခိုနယ်မြေများနှင့် မဲဆန္ဒနယ်နိုင်ငံများကို စာလုံးစောင်းဖြင့် ပြထားသည်။
၁ တရုတ်နိုင်ငံ[မှတ်စု 1] ၁၄၀၈၀၅၀၀၀၀ ဖေဖော်ဝါရီ ၆၊ ၂၀၂၁ 18% Official population clock
၂ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ၁၃၇၅၃၃၀၀၀၀ ဖေဖော်ဝါရီ ၆၊ ၂၀၂၁ 17.6% Official population clock
၃ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံ[မှတ်စု 2] ၃၃၂၇၉၀၀၀၀ ဖေဖော်ဝါရီ ၆၊ ၂၀၂၁ 4.26% Official population clock
၄ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ၂၆၃,၉၉၁,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 3.38% UN Projection
၅ ဘရာဇီးနိုင်ငံ ၂၁၃၄၃၆၀၀၀ ဖေဖော်ဝါရီ ၆၊ ၂၀၂၁ 2.73% Official population clock
၆ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ ၂၁၀၃၁၆၀၀၀ ဖေဖော်ဝါရီ ၆၊ ၂၀၂၁ 2.69% Official population clock
၇ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံ ၁၉၀,၈၈၆,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 2.44% UN Projection
၈ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ ၁၇၀၁၁၆၀၀၀ ဖေဖော်ဝါရီ ၆၊ ၂၀၂၁ 2.18% Official population clock
၉ ရုရှားနိုင်ငံ[မှတ်စု 3] ၁၄၆,၈၀၄,၃၇၂ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ 1.88% Official estimate
၁၀ ဂျပန်နိုင်ငံ ၁၂၆,၇၄၀,၀၀၀ ဇွန် ၁၊ ၂၀၁၇ 1.62% Monthly provisional estimate
၁၁ မက္ကဆီကိုနိုင်ငံ ၁၂၃,၅၁၈,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 1.58% Official projection Archived 22 June 2017 at the Wayback Machine.
၁၂ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ ၁၁၀၃၈၆၀၀၀ ဖေဖော်ဝါရီ ၆၊ ၂၀၂၁ 1.41% Official population clock
၁၃ အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံ ၁၀၂,၃၇၄,၀၄၄ ဇွန် ၁၁၊ ၂၀၁၇ 1.34% Census Population
၁၄ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ၉၃,၇၀၀,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 1.2% Annual official projection
၁၅ အီဂျစ်နိုင်ငံ ၁၀၀၉၇၄၄၀၀ ဖေဖော်ဝါရီ ၆၊ ၂၀၂၁ 1.29% Official population clock
၁၆ ဂျာမနီနိုင်ငံ ၈၂,၈၀၀,၀၀၀ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆ 1.06% Provisional official annual estimate
၁၇ ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ ၈၁,၃၄၀,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 1.040% UN Projection
၁၈ အီရန်နိုင်ငံ ၈၃၄၇၄၈၀၀ ဖေဖော်ဝါရီ ၆၊ ၂၀၂၁ 1.068% Official population clock
၁၉ တူရကီနိုင်ငံ ၇၉,၈၁၄,၈၇၁ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆ 1.02% Annual official estimate
၂၀ ထိုင်းနိုင်ငံ ၆၉,၀၃၈,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.88% UN Projection
၂၁ ပြင်သစ်နိုင်ငံ[မှတ်စု 4] ၆၇,၀၅၅,၀၀၀ ဇွန် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.86% Monthly official estimate
၂၂ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနိုင်ငံ ၆၅,၆၄၈,၁၀၀ ဇွန် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.84% Official mid-year estimate
၂၃ အီတလီနိုင်ငံ ၆၀,၅၈၉,၄၄၅ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆ 0.78% Official estimate
၂၄ တန်ဇေးနီးယားနိုင်ငံ[မှတ်စု 5] ၅၇,၃၁၀,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.73% UN projection
၂၅ တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ ၅၅,၄၂၆,၀၀၀ ဇွန် ၂၃၊ ၂၀၁၇ 0.72% Annual official estimate
၂၆ မြန်မာနိုင်ငံ ၅၃,၃၇၁,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.68% UN projection
၂၇ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ၅၀,၇၀၀,၀၀၀ ဇွန် ၂၃၊ ၂၀၁၇ 0.66% Annual official estimate
၂၈ ကိုလံဘီယာနိုင်ငံ ၅၁၂၄၇၀၀၀ ဖေဖော်ဝါရီ ၆၊ ၂၀၂၁ 0.656% Official population clock
၂၉ ကင်ညာနိုင်ငံ ၄၉,၇၀၀,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.64% UN projection
၃၀ စပိန်နိုင်ငံ ၄၆,၄၆၈,၁၀၂ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.59% Official estimate
၃၁ အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံ ၄၄,၂၇၁,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.57% UN projection
၃၂ ယူဂန်းဒါးနိုင်ငံ ၄၂,၈၆၃,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.55% UN projection
၃၃ ယူကရိန်းနိုင်ငံ[မှတ်စု 6] ၄၂,၅၀၁,၇၆၇ မေ ၁၊ ၂၀၁၇ 0.54% Monthly official estimate
၃၄ အယ်လ်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံ ၄၁,၃၁၈,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.53% UN projection
၃၅ ဆူဒန်နိုင်ငံ ၄၀,၅၃၃,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.52% UN projection
၃၆ ပိုလန်နိုင်ငံ ၃၈,၄၂၄,၀၀၀ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ 0.49% Official estimate
၃၇ အီရတ်နိုင်ငံ ၃၇,၈၈၃,၅၄၃ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.48% Official annual projection
၃၈ ကနေဒါနိုင်ငံ ၃၇၈၆၇၇၀၀ ဖေဖော်ဝါရီ ၆၊ ၂၀၂၁ 0.485% Official estimate
၃၉ ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံ ၃၄,၈၈၇,၄၆၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇
၄၀ မော်ရိုကိုနိုင်ငံ ၃၃,၈၄၈,၂၄၂ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.42% Official estimate
၄၁ မလေးရှားနိုင်ငံ ၃၃၇၆၄၅၀၀ ဖေဖော်ဝါရီ ၆၊ ၂၀၂၁ 0.432% Official population clock
၄၂ ဥဇဘက်ကစ္စတန်နိုင်ငံ ၃၂,၁၂၁,၀၀၀ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ 0.41% Official population report
၄၃ ပီရူးနိုင်ငံ ၃၁,၈၂၆,၀၁၈ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.41% Official annual projection
၄၄ ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံ ၃၁,၄၃၁,၁၆၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.4% Official annual projection
၄၅ အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ ၂၉,၇၀၀,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.38% Annual official estimate
၄၆ ဂါနာနိုင်ငံ ၂၈,၉၅၆,၅၈၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.37% Official annual projection
၄၇ နီပေါနိုင်ငံ ၂၈,၈၂၅,၇၀၉ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.37% Official annual projection Archived 28 January 2016 at the Wayback Machine.
၄၈ အင်ဂိုလာနိုင်ငံ ၂၈,၃၅၉,၆၃၄ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ 0.36% Official Estimate
၄၉ ယီမင်နိုင်ငံ ၂၈,၂၅၀,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.36% UN projection
၅၀ မိုဇမ်ဘစ်နိုင်ငံ ၂၇,၁၂၈,၅၃၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.35% Annual official projection
၅၁ မဒါဂတ်စကားနိုင်ငံ ၂၅,၅၇၁,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.330% UN projection
၅၂ မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ၂၅,၄၉၁,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.33% UN projection
၅၃ ဩစတြေးလျနိုင်ငံ ၂၅၉၄၃၈၀၀ ဖေဖော်ဝါရီ ၆၊ ၂၀၂၁ 0.332% Official population clock
၅၄ အိုင်ဗရီကို့စ်နိုင်ငံ ၂၄,၂၉၅,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.310% UN projection
55 ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံ[မှတ်စု 7] ၂၃,၅၅၀,၀၇၇ မေ ၁၊ ၂၀၁၇ 0.3% Monthly official estimate
၅၆ ကင်မရွန်းနိုင်ငံ ၂၃,၂၄၈,၀၄၄ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ 0.30% Annual official projection
၅၇ နိုင်ဂျာနိုင်ငံ ၂၁,၅၆၄,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.28% UN projection
၅၈ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ ၂၁,၂၀၃,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.27% Official estimate
၅၉ ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံ ၁၉,၇၆၀,၀၀၀ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၆ 0.25% Annual official estimate
၆၀ ဘာကီးနားဖားဆိုနိုင်ငံ ၁၉,၆၃၂,၁၄၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.25% Annual official projection
၆၁ မာလီနိုင်ငံ ၁၈,၉၀၇,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.24% UN projection
၆၂ ဆီးရီးယားနိုင်ငံ ၁၈,၉၀၆,၉၈၅ ဇူလိုင် ၆၊ ၂၀၁၇ 0.24% UN projection
၆၃ မာလဝီနိုင်ငံ ၁၈,၆၂၂,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.238% UN Projection
၆၄ ချီလီနိုင်ငံ ၁၈,၃၇၃,၉၁၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.24% Official annual projection
၆၅ ကာဇက်စတန်နိုင်ငံ ၁၈,၀၁၄,၂၀၀ ဇွန် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.23% Official estimate
၆၆ နယ်သာလန်နိုင်ငံ ၁၇၄၉၃၅၀၀ ဖေဖော်ဝါရီ ၆၊ ၂၀၂၁ 0.224% Official population clock
၆၇ အီကွေဒေါနိုင်ငံ ၁၇၅၈၆၁၀၀ ဖေဖော်ဝါရီ ၆၊ ၂၀၂၁ 0.225% Official population clock
၆၈ ဂွါတီမာလာနိုင်ငံ ၁၆,၁၇၆,၁၃၃ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၅ 0.21% Official estimate
၆၉ ဇမ်ဘီယာနိုင်ငံ ၁၅,၉၃၃,၈၈၃ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.2% Official annual projection
၇၀ ကိုလံဘီယာနိုင်ငံ ၁၅,၆၂၆,၄၄၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.2% Official annual projection
၇၁ ဆီနီဂေါနိုင်ငံ ၁၅,၂၅၆,၃၄၆ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ 0.20% Official annual projection
၇၂ ချဒ်နိုင်ငံ ၁၄,၉၀၀,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.19% UN projection
၇၃ ဇင်ဘာဘွေနိုင်ငံ ၁၄,၅၄၂,၂၃၅ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.19% Official annual projection Archived 28 April 2016 at the Wayback Machine.
၇၄ ဂီနီနိုင်ငံ ၁၃,၂၉၁,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.17% UN projection
၇၅ တောင်ဆူဒန်နိုင်ငံ ၁၂,၁၃၁,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.16% Official annual projection
၇၆ ရဝမ်ဒါနိုင်ငံ ၁၁,၈၀၉,၃၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.15% Official projection (medium scenario)
၇၇ ဆိုမာလီယာနိုင်ငံ[မှတ်စု 8] ၁၁,၃၉၂,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.15% UN projection
၇၈ ဘယ်လ်ဂျီယမ်နိုင်ငံ ၁၁,၃၆၂,၆၀၂ မေ ၁၊ ၂၀၁၇ 0.15% Monthly official estimate
၇၉ တူနီးရှားနိုင်ငံ ၁၁,၂၉၉,၄၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.14% Official estimate
၈၀ ဟေတီနိုင်ငံ ၁၁,၂၄၄,၇၇၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.14% Official projection
၈၁ ကျူးဘားနိုင်ငံ ၁၁,၂၃၉,၂၂၄ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၅ 0.14% Annual official estimate
၈၂ ဘိုလီးဗီးယားနိုင်ငံ ၁၁,၁၄၅,၇၇၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.14% Official Estimate
၈၃ ဂရိနိုင်ငံ ၁၀,၇၈၃,၇၄၈ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၆ 0.14% Official estimate
၈၄ ဘီနင်နိုင်ငံ ၁၀,၆၅၃,၆၅၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.14% Official projection
၈၅ ချက်သမ္မတနိုင်ငံ ၁၀,၅၇၉,၀၆၇ မတ် ၃၁၊ ၂၀၁၇ 0.14% Official quarterly estimate
၈၆ ဘူရွန်ဒီနိုင်ငံ ၁၀,၄၀၀,၉၃၈ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.13% Official annual projection
၈၇ ပေါ်တူဂီနိုင်ငံ ၁၀,၃၀၉,၅၇၃ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆ 0.13% Annual official estimate
၈၈ ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ ၁၀,၁၆၉,၁၇၂ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.13% Official projection Archived 25 May 2017 at the Wayback Machine.
၈၉ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုနိုင်ငံ ၁၀,၁၄၅,၃၁၂ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.13% Official annual projection
၉၀ ဆွီဒင်နိုင်ငံ ၁၀၃၉၇၀၀၀ ဖေဖော်ဝါရီ ၆၊ ၂၀၂၁ 0.133% Official Population Clock
၉၁ ဂျော်ဒန်နိုင်ငံ ၁၀၇၈၈၆၈၀ ဖေဖော်ဝါရီ ၆၊ ၂၀၂၁ 0.138% Official population clock Archived 19 October 2017 at the Wayback Machine.
၉၂ အဇာဘိုင်ဂျန်နိုင်ငံ ၉,၈၂၃,၆၆၇ မတ် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.13% Official estimate Archived 25 May 2017 at the Wayback Machine.
၉၃ ဟန်ဂေရီနိုင်ငံ ၉,၇၉၉,၀၀၀ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ 0.13% Annual official estimate
၉၄ ဘီလာရုဇ်နိုင်ငံ ၉,၄၉၈,၆၀၀ ဧပြီ ၁၊ ၂၀၁၇ 0.122% Quarterly official estimate
၉၅ ဟွန်ဒူးရပ်စ်နိုင်ငံ ၈,၈၆၆,၃၅၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.113% Official annual projection
၉၆ ဩစတြီးယားနိုင်ငံ ၈,၇၈၃,၁၉၈ ဧပြီ ၁၊ ၂၀၁၇ 0.112% Quarterly provisional figure
၉၇ တာဂျစ်ကစ္စတန်နိုင်ငံ ၈,၇၄၂,၀၀၀ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ 0.112% Official estimate
၉၈ အစ္စရေးနိုင်ငံ ၉၃၁၄၅၂၀ ဖေဖော်ဝါရီ ၆၊ ၂၀၂၁ 0.119% Official population clock
၉၉ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ ၈,၄၁၇,၇၀၀ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆ 0.108% Quarterly provisional figure
၁၀၀ ပါပူအာနယူးဂီနီနိုင်ငံ ၈,၁၅၁,၃၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.104% Annual official estimate
– ဟောင်ကောင် (တရုတ်နိုင်ငံ) ၇,၃၇၄,၉၀၀ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆ 0.094% Official estimate
၁၀၁ တိုဂိုနိုင်ငံ ၇,၁၇၈,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.092% Official estimate Archived 8 September 2015 at the Wayback Machine.
၁၀၂ ဘူဂေးရီးယားနိုင်ငံ ၇,၁၀၁,၈၅၉ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆ 0.091% Official estimate
၁၀၃ ဆီရာလီယွန်နိုင်ငံ ၇,၀၇၅,၆၄၁ ဒီဇင်ဘာ ၄၊ ၂၀၁၅ 0.091% Preliminary 2015 census result
၁၀၄ ဆားဘီးယားနိုင်ငံ[မှတ်စု 9] ၇,၀၅၈,၃၂၂ ဇွန် ၃၀၊ ၂၀၁၆ 0.091% Annual official estimate
၁၀၅ ပါရာဂွေးနိုင်ငံ ၆,၉၅၃,၆၄၆ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ 0.089% Official estimate
၁၀၆ အယ်ဆာဗေဒိုနိုင်ငံ ၆,၅၈၁,၉၄၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.084% Official projection
၁၀၇ လာအိုနိုင်ငံ ၆,၄၉၂,၄၀၀ မတ် ၁၊ ၂၀၁၅ 0.083% Preliminary 2015 census result
၁၀၈ လစ်ဗျားနိုင်ငံ ၆,၃၈၅,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.082% Official annual projection
၁၀၉ နီကာရာဂွါနိုင်ငံ ၆,၂၆၂,၇၀၃ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၅ 0.08% Official estimate
၁၁၀ ကာဂျစ္စတန်နိုင်ငံ ၆,၁၄၀,၂၀၀ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ 0.079% Official estimate
၁၁၁ လက်ဘနွန်နိုင်ငံ ၅,၉၈၈,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.077% UN projection
၁၁၂ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ ၅,၇၅၆,၁၇၀ မတ် ၃၁၊ ၂၀၁၇ 0.074% Quarterly official estimate
၁၁၃ စင်ကာပူနိုင်ငံ ၅,၆၀၇,၃၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.072% Official estimate Archived 29 November 2015 at the Wayback Machine.
၁၁၄ ဖင်လန်နိုင်ငံ ၅,၅၀၅,၅၇၅ ဧပြီ ၃၀၊ ၂၀၁၇ 0.07% Monthly official estimate
၁၁၅ အီရီထရီးယားနိုင်ငံ ၅,၄၈၂,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.07% UN projection
၁၁၆ ဆလိုဗက်ကီးယားနိုင်ငံ ၅,၄၃၅,၃၄၃ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆ 0.07% Official estimate
၁၁၇ နော်ဝေနိုင်ငံ ၅,၂၆၇,၁၄၆ ဧပြီ ၁၊ ၂၀၁၇ 0.067% Quarterly official estimate
၁၁၈ ဗဟိုအာဖရိကသမ္မတနိုင်ငံ ၅,၀၉၉,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.065% UN projection
၁၁၉ ကော့စတာရီကာနိုင်ငံ ၄,၈၉၀,၃၇၉ ဇွန် ၃၀၊ ၂၀၁၆ 0.063% Official estimate
- ပါလက်စတိုင်း ၄,၈၁၆,၅၀၃ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.062% Official estimate
၁၂၀ နယူးဇီလန်နိုင်ငံ ၅၀၈၀၉၉၀ ဖေဖော်ဝါရီ ၆၊ ၂၀၂၁ 0.065% Official population clock
၁၂၁ အိုင်ယာလန်နိုင်ငံ ၄,၇၅၇,၉၇၆ ဇူလိုင် ၁၄၊ ၂၀၁၆ 0.061% Preliminary 2016 census result
၁၂၂ တာ့ခ်မင်နစ္စတန်နိုင်ငံ ၄,၇၅၁,၁၂၀ ဒီဇင်ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၂ 0.061% Preliminary 2012 census result
၁၂၃ ကွန်ဂိုသမ္မတနိုင်ငံ ၄,၇၄၁,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.061% UN projection
၁၂၄ အိုမန်နိုင်ငံ ၄,၅၇၃,၀၇၅ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ 0.059% Official estimate
၁၂၅ ခရိုအေးရှားနိုင်ငံ ၄,၁၅၄,၂၁၃ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆ 0.053% Annual official estimate
၁၂၆ ကူဝိတ်နိုင်ငံ ၄,၁၃၂,၄၁၅ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.053% Official estimate
၁၂၇ လိုက်ဘေးရီးယားနိုင်ငံ ၄,၀၇၆,၅၃၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.052% Official projection
၁၂၈ ပနားမားနိုင်ငံ ၃,၈၁၄,၆၇၂ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.049% Official estimate
၁၂၉ မော်ရီတေးနီးယားနိုင်ငံ ၃,၇၁၈,၆၇၈ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.048% Annual official projection
၁၃၀ ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံ[မှတ်စု 10] ၃,၇၁၈,၂၀၀ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ 0.048% Annual official estimate
၁၃၁ မော်လ်ဒိုဗာနိုင်ငံ[မှတ်စု 11] ၃,၅၅၀,၉၀၀ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ 0.045% Official estimate
၁၃၂ ဘော့စနီးယားနှင့် ဟာဇီဂိုဗီးနားနိုင်ငံ ၃,၅၃၁,၁၅၉ အောက်တိုဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၃ 0.045% Final 2013 census result Archived 24 December 2017 at the Wayback Machine.
၁၃၃ ဥရုဂွေးနိုင်ငံ ၃,၄၉၃,၂၀၅ ဇွန် ၃၀၊ ၂၀၁၇ 0.045% Annual official projection
– ပေါ်တိုရီကိုနိုင်ငံ (U.S.) ၃,၄၁၁,၃၀၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.044% Official estimate
၁၃၄ မွန်ဂိုးလီးယားနိုင်ငံ ၃၃၈၅၈၇၅ ဖေဖော်ဝါရီ ၆၊ ၂၀၂၁ 0.043% Official population clock
၁၃၅ အာမေးနီးယားနိုင်ငံ ၂,၉၈၁,၅၀၀ မတ် ၃၁၊ ၂၀၁၇ 0.038% Quarterly official estimate
၁၃၆ အယ်လ်ဘေးနီးယားနိုင်ငံ ၂,၈၇၆,၅၉၁ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ 0.037% Annual official estimate Archived 16 October 2017 at the Wayback Machine.
၁၃၇ လစ်သူယေးနီးယားနိုင်ငံ ၂,၈၂၃,၆၁၈ ဇွန် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.036% Monthly official estimate
၁၃၈ ဂျမေကာနိုင်ငံ ၂,၇၃၀,၈၉၄ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆ 0.035% Official estimate
၁၃၉ ကာတာနိုင်ငံ ၂,၆၇၅,၅၂၂ ဇန်နဝါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၇ 0.034% Monthly official estimate
၁၄၀ နမီးဘီးယားနိုင်ငံ ၂,၃၂၄,၃၈၈ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.03% Official projection
၁၄၁ ဘော့ဆွာနာနိုင်ငံ ၂,၂၃၀,၉၀၅ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.029% Official annual projection Archived 19 September 2016 at the Wayback Machine.
၁၄၂ မက်စီဒိုးနီးယားနိုင်ငံ ၂,၀၇၃,၇၀၂ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆ 0.027% Official estimate
၁၄၃ ဆလိုဗေးနီးယားနိုင်ငံ ၂,၀၆၅,၈၉၅ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ 0.026% Official estimate
၁၄၄ လတ်ဗီယာနိုင်ငံ ၁,၉၃၉,၅၀၀ ဇွန် ၁၊ ၂၀၁၇ 0.025% Monthly official estimate Archived 28 June 2013 at the Wayback Machine.
၁၄၅ လီဆိုသိုနိုင်ငံ ၁,၉၁၆,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၄ 0.025% Official estimate
၁၄၆ ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံ ၁,၈၈၂,၄၅၀ ဧပြီ ၁၅၊ ၂၀၁၃ 0.024% Preliminary 2013 census result
– Kosovo[မှတ်စု 12] ၁,၈၃၆,၉၇၈ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၆ 0.024% Official annual projection Archived 18 October 2015 at the Wayback Machine.
၁၄၇ ဂါဘွန်နိုင်ငံ ၁,၈၁၁,၀၇၉ ဇွန် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.023% Estimate (press release)
၁၄၈ ဂီနီ-ဘီစောနိုင်ငံ ၁,၅၄၇,၇၇၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.02% Official projection Archived2February 2017 at the Wayback Machine.
၁၄၉ ဘာရိန်းနိုင်ငံ ၁,၄၀၄,၉၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.018% Official annual projection Archived6February 2017 at the Wayback Machine.
၁၅၀ ထရီနီဒတ်နှင့် တိုဘက်ဂိုနိုင်ငံ ၁,၃၅၃,၈၉၅ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.017% Official estimate
၁၅၁ အက်စတိုးနီးယားနိုင်ငံ ၁,၃၁၇,၇၉၇ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ 0.017% Official estimate Archived 23 November 2012 at the Wayback Machine.
၁၅၂ မောရစ်ရှနိုင်ငံ ၁,၂၆၃,၈၂၀ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆ 0.016% Official estimate
၁၅၃ အီကွေတာဂီနီနိုင်ငံ ၁,၂၂၂,၄၄၂ ဇူလိုင် ၄၊ ၂၀၁၅ 0.016% Preliminary 2015 census result
၁၅၄ အရှေ့တီမောနိုင်ငံ ၁,၁၆၇,၂၄၂ ဇူလိုင် ၁၁၊ ၂၀၁၅ 0.015% Preliminary 2015 census result
၁၅၅ ဆွာဇီလန်နိုင်ငံ ၁,၁၃၂,၆၅၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.014% Official projection Archived 23 July 2015 at the Wayback Machine.
၁၅၆ ဂျီဘူတီနိုင်ငံ ၉၀၀,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.012% UN projection
၁၅၇ ဖီဂျီနိုင်ငံ ၈၆၉,၄၅၈ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၅ 0.0111% Annual official estimate
၁၅၈ ဆိုက်ပရပ်စ်နိုင်ငံ ၈၄၈,၃၀၀ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၅ 0.011% Official estimate
၁၅၉ ကိုမိုရိုနိုင်ငံ ၈၀၆,၁၅၃ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.01% Official estimate
၁၆၀ ဘူတန်နိုင်ငံ ၈၃၅၈၅၀ ဖေဖော်ဝါရီ ၆၊ ၂၀၂၁ 0.0107% Official population clock
၁၆၁ ဂိုင်ယာနာနိုင်ငံ ၇၄၆,၉၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၃ 0.01% Official estimate Archived 29 January 2016 at the Wayback Machine.
– မကာအို (တရုတ်နိုင်ငံ) ၆၄၈,၃၀၀ မတ် ၃၁၊ ၂၀၁၇ 0.008% Official quarterly estimate
၁၆၂ ဆော်လမွန်ကျွန်းစု ၆၄၂,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၅ 0.008% Annual official estimate
၁၆၃ မွန်တီနီဂရိုးနိုင်ငံ ၆၂၂,၃၈၇ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ 0.008% Official estimate
– အနောက်ဆဟာရ[မှတ်စု 13] ၅၈၄,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.0075% UN projection
၁၆၄ လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံ ၅၉၀,၆၆၇ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ 0.0076%
၁၆၅ ဆူရာနမ်နိုင်ငံ ၅၄၁,၆၃၈ ဩဂုတ် ၁၃၊ ၂၀၁၂ 0.0069% Final 2012 census result
၁၆၆ ကိတ်ဗာဒီနိုင်ငံ ၅၃၁,၂၃၉ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.0068% Official annual projection Archived 10 September 2014 at the Wayback Machine.
– ထရန်နစ္စတြီးယား[မှတ်စု 14] ၄၇၅,၆၆၅ အောက်တိုဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၅ 0.006% Preliminary 2015 census result
၁၆၇ မော်လတာနိုင်ငံ ၄၂၉,၃၄၄ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၄ 0.0055% Official estimate
၁၆၈ ဘရူနိုင်းနိုင်ငံ ၄၁၇,၂၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၅ 0.0053% Official estimate
၁၆၉ ဘလိဇ်နိုင်ငံ ၃၈၀,၀၁၀ အောက်တိုဘာ ၁၊ ၂၀၁၆ 0.0049% Official estimate
၁၇၀ ဘဟားမားနိုင်ငံ ၃၇၈,၀၄၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.0048% Official projection
၁၇၁ မော်လဒိုက်နိုင်ငံ ၃၄၄,၀၂၃ စက်တင်ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၄ 0.0044% Preliminary 2014 census result
၁၇၂ အိုက်စလန်နိုင်ငံ ၃၄၀,၁၁၀ မတ် ၃၁၊ ၂၀၁၇ 0.0044% Official quarterly estimate
– မြောက်ပိုင်းဆိုက်ပရပ်စ်နိုင်ငံ[မှတ်စု 15] ၃၁၃,၆၂၆ ဇွန် ၃၀၊ ၂၀၁၄ 0.004% Official estimate
၁၇၃ ဘာဘေးဒိုးစ်နိုင်ငံ ၂၈၅,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.0036% UN projection
၁၇၄ ဗနွားတူနိုင်ငံ ၂၇၇,၅၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၅ 0.0036% Annual official estimate
– ပြင်သစ်ပိုလီနီးရှား (ပြင်သစ်နိုင်ငံ) ၂၇၁,၈၀၀ ဒီဇငဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၄ 0.0035% Official estimate
– နယူးကယ်လီဒိုးနီးယား (ပြင်သစ်နိုင်ငံ) ၂၆၈,၇၆၇ ဩဂုတ် ၂၆၊ ၂၀၁၄ 0.0034% Preliminary 2014 census result
– အက်ဘ်ခါဇီယာ[မှတ်စု 16] ၂၄၀,၇၀၅ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၁၁ 0.0031% 2011 census result Archived9February 2012 at the Wayback Machine.
၁၇၅ ဆမိုးအားနိုင်ငံ ၁၉၆,၃၁၅ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ 0.0025% Official projection
၁၇၆ ဆောင်တူမေးနှင့် ပရင်စီပီနိုင်ငံ ၁၈၇,၃၅၆ မေ ၁၃၊ ၂၀၁၂ 0.0024% 2012 census result Archived3March 2016 at the Wayback Machine.
၁၇၇ စိန့်လူစီယာနိုင်ငံ ၁၈၆,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.0024% UN projection
– ဂူအမ် (U.S.) ၁၈၄,၂၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၅ 0.0024% Annual official estimate
– ကျူရာဆိုး (နယ်သာလန်) ၁၅၈,၉၈၆ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၆ 0.002% Annual official estimate
– နာဂိုမို-ကရာဘက် သမ္မတနိုင်ငံ[မှတ်စု 17] ၁၅၀,၉၃၂ ဒီဇင်ဘာ ၁၊ ၂၀၁၅ 0.0019% Preliminary 2015 census result Archived 15 August 2016 at the Wayback Machine.
၁၇၈ ကီရီဘတ်စ်နိုင်ငံ ၁၁၃,၄၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၅ 0.0015% Annual official estimate
– အာရူးဗာ (နယ်သာလန်) ၁၁၀,၁၀၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၅ 0.0014% Official quarterly estimate
၁၇၉ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရိနေဒိုင်နိုင်ငံ ၁၀၉,၉၉၁ ဇွန် ၁၂၊ ၂၀၁၂ 0.0014% Preliminary 2012 census result
– အမေရိကန် ဗာဂျင်အိုင်းလန်း (U.S.) ၁၀၆,၀၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.0014% UN projection
၁၈၀ ဂရီနေဒါနိုင်ငံ ၁၀၃,၃၂၈ မေ ၁၂၊ ၂၀၁၁ 0.0013% 2011 census result Archived 14 June 2012 at the Wayback Machine.
၁၈၁ တုံဂါနိုင်ငံ ၁၀၃,၂၅၂ နိုဝင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၁ 0.0013% 2011 census result
၁၈၂ မိုက်ခရိုနီးရှားနိုင်ငံ ၁၀၂,၈၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၅ 0.0013% Annual official estimate
– ဂျာဇီ (UK) ၁၀၂,၇၀၀ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၅ 0.0013% Annual official estimate
၁၈၃ ဆေးရှဲနိုင်ငံ ၉၄,၂၀၅ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆ 0.0012% Official estimate
၁၈၄ အင်တီဂွါနှင့် ဘာဘူဒါနိုင်ငံ ၈၆,၂၉၅ မေ ၂၇၊ ၂၀၁၁ 0.0011% Preliminary 2011 census result
– မမ်းကျွန်း (UK) ၈၃,၃၁၄ ဧပြီ ၂၄၊ ၂၀၁၆ 0.0011% 2016 census result
၁၈၅ အင်ဒိုရာနိုင်ငံ ၇၈,၂၄၆ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆ 0.001% Annual official estimate Archived 25 May 2017 at the Wayback Machine.
၁၈၆ ဒိုမီနီကာနိုင်ငံ ၇၁,၂၉၃ မေ ၁၄၊ ၂၀၁၁ 0.00091% Preliminary 2011 census result
– ဂန်းစီးနိုင်ငံ (UK) ၆၂,၇၂၃ မတ် ၃၁၊ ၂၀၁၆ 0.0008% Official estimate
– ဗမျူဒါး (UK) ၆၁,၉၅၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၃ 0.00079% Official estimate Archived 29 January 2016 at the Wayback Machine.
– ကေမန်ကျွန်းစု (UK) ၆၀,၄၁၃ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၅ 0.00077% Official estimate
– အမေရိကန်ဆမိုးအား (U.S.) ၅၇,၁၀၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၅ 0.00073% Annual official estimate
– မြောက်မာရီယာနာကျွန်းစု (U.S.) ၅၆,၉၄၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၅ 0.00073% Annual official estimate
– ဂရင်းလန်း (ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ) ၅၆,၄၈၃ စက်တင်ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၆ 0.00072% Annual official estimate
၁၈၇ မာရှယ်အိုင်းလန်း နိုင်ငံ ၅၄,၈၈၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၅ 0.0007% Annual official estimate
– တောင်အော်ဆက်တီးယား[မှတ်စု 18] ၅၃,၅၃၂ အောက်တိုဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၅ 0.00069% Preliminary 2015 census result
– ဖရိုးကျွန်းစု (ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ) ၅၀,၀၄၅ ဧပြီ ၁၊ ၂၀၁၇ 0.00064% Monthly official estimate
၁၈၈ စိန့်ကစ်နှင့် နီးဗစ်နိုင်ငံ ၄၆,၂၀၄ မေ ၁၅၊ ၂၀၁၁ 0.00059% 2011 census result
– Sint Maarten (နယ်သာလန်) ၃၉,၄၁၀ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၆ 0.0005% Official estimate Archived 30 September 2016 at the Wayback Machine.
၁၈၉ လစ်တန်စတိန်းနိုင်ငံ ၃၇,၈၁၅ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆ 0.00048% Semi annual official estimate
၁၉၀ မိုနာကိုနိုင်ငံ ၃၇,၅၅၀ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆ 0.00048% Annual official estimate
– စိန့်မာတင် (ပြင်သစ်နိုင်ငံ) ၃၆,၄၅၇ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၅ 0.00047% Annual official estimate
– ဂျီဘရောလ်တာနိုင်ငံ (UK) ၃၃,၁၄၀ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၄ 0.00042% Annual official estimate
၁၉၁ ဆန်မာရီနိုနိုင်ငံ ၃၃,၁၂၁ စက်တင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၆ 0.00042% Monthly official estimate
– တာ့ခ်နှင့် ကေးကို့စ်ကျွန်းများ (UK) ၃၁,၄၅၈ ဇန်နဝါရီ ၂၅၊ ၂၀၁၂ 0.0004% 2012 census result
– ဗြိတိသျှ ဗာဂျင်အိုင်းလန်း (UK) ၂၈,၅၁၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၃ 0.00036% Official estimate Archived 29 January 2016 at the Wayback Machine.
– ဘိုနီအာ (နယ်သာလန်နိုင်ငံ) ၁၈,၉၀၅ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၅ 0.00024% Official estimate
– ကွတ်ကျွန်းစု (NZ) ၁၈,၁၀၀ မတ် ၁၊ ၂၀၁၆ 0.00023% Official quarterly estimate
၁၉၂ ပလောင်းနိုင်ငံ ၁၇,၉၅၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၅ 0.00023% Annual official estimate
– အန်ဂီလာ (UK) ၁၃,၄၅၂ မေ ၁၁၊ ၂၀၁၁ 0.00017% Preliminary 2011 census result
– ဝေါလစ်နှင့်ဖူကျူးနား (ပြင်သစ်နိုင်ငံ) ၁၁,၇၅၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၅ 0.00015% Annual official estimate
၁၉၃ တူဗားလူနိုင်ငံ ၁၀,၆၄၀ နိုဝင်ဘာ ၄၊ ၂၀၁၂ 0.00014% 2012 census result
၁၉၄ နအူရူးနိုင်ငံ ၁၀,၀၈၄ အောက်တိုဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၁ 0.00013% 2011 census result
– Saint Barthélemy (ပြင်သစ်နိုင်ငံ) ၉,၄၁၇ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၅ 0.00012% Annual official estimate
– Saint Pierre and Miquelon (ပြင်သစ်နိုင်ငံ) ၆,၂၈၆ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၅ 0.000080% Annual official estimate
– စိန့်ဟယ်လယ်နာ၊ အစန်းရှင်း နှင့်
ထွစ်စတန် ဒါကူနှာ (UK) ၅,၆၃၃ ဖေဖော်ဝါရီ ၇၊ ၂၀၁၆ 0.000072% 2016 census result
– မွန်ဆာရတ် (UK) ၄,၉၂၂ မေ ၁၂ဝ ၂၀၁၁ 0.000063% 2011 census result Archived3April 2019 at the Wayback Machine.
– Sint Eustatius (နယ်သာလန်နိုင်ငံ) ၃,၈၇၇ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၅ 0.000050% Official estimate
– ဖော့ကလန်ကျွန်းစု (UK) ၂,၅၆၃ ဧပြီ ၁၅၊ ၂၀၁၂ 0.000033% 2012 census result
– နောဖုတ်ကျွန်း (ဩစတြေးလျနိုင်ငံ) ၂,၃၀၂ ဩဂုတ် ၉၊ ၂၀၁၁ 0.000029% 2011 census result Archived3March 2016 at the Wayback Machine.
– ခရစ္စမတ်ကျွန်း (ဩစတြေးလျနိုင်ငံ) ၂,၀၇၂ ဩဂုတ် ၉၊ ၂၀၁၁ 0.000027% 2011 census result
– Saba (နယ်သာလန်နိုင်ငံ) ၁,၈၁၁ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၅ 0.000023% Official estimate
– နျူးရယ်နိုင်ငံ (NZ) ၁,၄၇၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၅ 0.00002% Annual official estimate
– တိုကလောင် (NZ) ၁,၄၁၁ အောက်တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၁ 0.000018% 2011 census result Archived 15 August 2012 at the Wayback Machine.
၁၉၅ ဗာတီကန်စီးတီး ၈၀၀ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၄ 0.000010% Official estimate
– ကိုကိုး(ကီးလင်း) ကျွန်းများ (ဩစတြေးလျနိုင်ငံ) ၅၅၀ ဩဂုတ် ၉၊ ၂၀၁၁ 0.0000070% 2011 census result
– ပစ်ကိန်ကျွန်းစု (UK) ၅၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၄ 0.00000073% တရားဝင် ခန့်မှန်း
လူဦးရေအလိုက် တိုက်ကြီးများ စာရင်း
သန်းခေါင်စာရင်း အချက်အလက်များသည် တရုတ်ပြည်မကြီးအတွက် ဖြစ်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံ၏ အထူးအုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေများဖြစ်သော ဟောင်ကောင်နှင့် မကာအိုတို့ မပါဝင်ပါ။
ပြည်နယ် ၅၀ နှင့် ကိုလံဘီယာ ခရိုင်ရှိ လူဦးရေ ဖြစ်သည်။
ကရိုင်းမီးယား ကျွန်းဆွယ် နှင့် ဆီပတ်စတိုပိုမြို့ တို့ အပါအဝင်
ပြင်သစ်၏ ပင်လယ်ရပ်ခြား နယ်မြေများဖြစ်သော ပြင်သစ်ပိုလီနီးရှား၊ နယူးကယ်လီဒိုးနီးယား၊ ပြင်သစ် တောင်ပိုင်းနှင့် အန္တာတိကမြေ၊ ကလစ်ပါတွန်ကျွန်း၊ စိန့်ဘာသလမီ၊ စိန့်မာတင်၊ စိန့်ပီရဲနှင့် မက်ဂလုံ နှင့် ဝေါလစ်နှင့်ဖူကျူးနား တို့ မပါဝင်ပါ။
ကရိုင်းမီးယား ကျွန်းဆွယ် နှင့် ဆီပတ်စတိုပိုမြို့ တို့ မပါဘဲ ဒွန်ဘတ်စ်ဒေသ ပါဝင်သည်။
ထိုင်ဝမ် (တရုတ်သမ္မတနိုင်ငံ) တွင် ကျင်းမင်၊ မားကျူ၊ ဖုန်ဟူကျွန်းများ စသည်တို့ ပါဝင်သည်။
ပန့်လန်း နှင့် ဆိုမာလီလန်း တို့ ပါဝင်သည်။
အက်ဘ်ခါဇီယာ (၂၀၁၁ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ၂၄၂,၈၆၂) နှင့် တောင်အော်ဆက်တီးယား (၂၀၁၅ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ၅၃,၅၅၉) တို့ မပါဝင်ပါ။
ထရန်နစ္စတြီးယား (၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ၅၀၅,၁၅၃) မပါဝင်ပါ။
ကိုဆိုဗို သည် ကိုဆိုဗိုသမ္မတနိုင်ငံနှင့် ဆားဘီးယားနိုင်ငံတို့အကြား အငြင်းပွားနေသော ဒေသတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ကိုဆိုဗိုသမ္မတနိုင်ငံသည် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇ ရက်နေ့တွင် လွတ်လပ်သောနိုင်ငံအဖြစ် ကြေငြာခဲ့သော်လည်း ဆားဘီးယားနိုင်ငံက ယင်း၏ အချုပ်အခြာ အာဏာပိုင်နယ်မြေအဖြစ် ဆက်လက်ကိုင်စွဲထားသည်။ အစိုးရနှစ်ရပ်သည် ၂၀၁၃ တွင် ဘရပ်စ်ဆဲသဘောတူညီမှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် နှစ်ဖက်ဆက်ဆံရေးများ စတင်ခဲ့သည်။ ကိုဆိုဗိုအား လွတ်လပ်သော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအဖြစ် ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ ၁၉၃ နိုင်ငံအနက် ၁၁၁ နိုင်ငံက အသိအမှတ်ပြုထားသည်။
နယ်မြေတစ်ခုလုံးရှိ အုပ်ချုပ်ရေးကို မော်ရိုကိုနိုင်ငံနှင့် ဆာရာဝီ အာရပ် ဒီမိုကရက်တစ် သမ္မတနိုင်ငံအဖြစ် နှစ်ခုပိုင်းခြားထားသည်။
လွတ်လပ်သော နိုင်ငံဟု ဆိုသော်လည်း မော်လ်ဒိုဗာနိုင်ငံ၏ တရားဝင် အစိတ်အပိုင်း။
လွတ်လပ်သော နိုင်ငံဟု ဆိုသော်လည်း ဆိုက်ပရပ်စ်နိုင်ငံ၏ တရားဝင်အစိတ်အပိုင်း။
အက်ဘ်ခါဇီယာ၏ အခြေအနေသည် အငြင်းပွားဖွယ်ရာ ဖြစ်သည်။ လွတ်လပ်သည့်နိုင်ငံအဖြစ် ဆိုသော်လည်း နိုင်ငံအနည်းအကျဉ်းကသာ အသိအမှတ်ပြုထားသည်။ ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံအစိုးရနှင့် ကျန် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအများစုက အက်ဘ်ခါဇီယာသည် ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်သာ လက်ခံထားသည်။ ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံ၏ တရားဝင်နယ်မြေသတ်မှတ်ချက်တွင် အက်ဘ်ခါဇီယာသည် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဖြစ်ပြီး အုပ်ချုပ်ရေးအစိုးရမှာ တဘီလစ်ဆီမြို့တွင် ရုံးစိုက်သည်။
လွတ်လပ်သောနိုင်ငံဟု ဆိုသော်လည်း အဇာဘိုင်ဂျန်နိုင်ငံ၏ တရားဝင် အစိတ်အပိုင်း။
တောင်အော်ဆက်တီးယား၏ အခြေအနေသည် အငြင်းပွားဖွယ်ရာ ဖြစ်သည်။ လွတ်လပ်သည့်နိုင်ငံအဖြစ် ဆိုသော်လည်း နိုင်ငံအနည်းအကျဉ်းကသာ အသိအမှတ်ပြုထားသည်။ ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံအစိုးရနှင့် ကျန် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအများစုက တောင်အော်ဆက်တီးယားသည် ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်သာ လက်ခံထားသည်။
"China's Population: The Most Surprising Demographic Crisis" (2013). The Economist.
World Population Prospects 2017။